Izindaba - Umsebenzi Wokunwetshwa kwe-SJZ CHEM-PHARM CO., LTD-Uhambo oluya eJiulongtan
Ngo-Okthoba 31, 2019, kule sizini yegolide yasekwindla, i-SJZ CHEM-PHARM CO., LTD yahlela abasebenzi ukuthi benze imisebenzi yokuqwala intaba nentuthuko endaweni yaseJiulongtan Scenic yasePingshan County, eShijiazhuang.
Sibhekene nelanga lasekuseni ekuseni, sesiqale uhambo lokuqhela kuphithizelo lwedolobha. Hamba ungene ezintabeni uphefumule umoya omusha oqabulayo wemvelo. Enqubweni yokukhuphuka ngaphandle, akekho owamemeza umunyu nokukhathala, akekho owasala emuva futhi wahlehla, kanti abanye babezabalazela ngesibindi indawo yokuqala futhi babambisana kuyo yonke le ndlela. Ukukhathala ekukhuphukeni kwezintaba kuphenduke injabulo yokunqoba ekuhlekeni okukhululekile. Ngenkathi uzivocavoca futhi ujabulile, kukhombise ngokuphelele ikhwalithi enhle nesithombe seqembu lethu laseChenbang. Ngemuva kokukhuphuka, saya ensimini yezithelo zama-apula siyokhafa, sinambitha ama-apula amasha asanda kukhiwa ezihlahleni, sisondela emvelweni futhi sijabulela injabulo yokuvuna.
Ithatha imisebenzi yokufinyelela ngaphandle njengebhuloho, inhlangano ihlela ukuqwala izintaba kwabasebenzi, ukukha ingadi yezithelo, kanye namaphathi edina, okunciphisa ingcindezi yomsebenzi yabasebenzi futhi kunciphise ibanga phakathi kozakwabo. Kwakha amathuba okuxhumana phakathi kozakwethu. Abasebenzi abasebasha bathola ulwazi oluthe xaxa ngokwabelana ngolwazi kwabasebenzi asebekhulile, kanti nabasebenzi asebekhulile nabo batheleleka ngamandla obusha bentsha. Wonke umuntu unokuqonda okusha komunye nomunye futhi waqinisa ubumbano lweqembu leChempharm.